राती सु’त्दा कपाल बाँ’धेर सु’त्ने की खो’लेर ? यस्तो छ सही तरिका – Jagaran Nepal
राती सु’त्दा कपाल बाँ’धेर सु’त्ने की खो’लेर ? यस्तो छ सही तरिका
काठमाडौँ । कपाल मानिसको सौन्दर्यको एक पाटो हो । त्यसकारण कपाललाई विशेष हे’रचाह गर्न ज’रुरी रहेको छ । दिन भर त हामी कपालको स्या’हर खुबै गर्छौ, नु’हाउँछौँ, तेल लगाएर मालिस गर्छौ ।
कतै हिड्दा धुलोबाट जो’गाउनको लागि म’साज गर्छौ । तर रात भर भने हामी कपाललाई खासै के’यर गर्दैनौँ । तर विशेष गरेर राती सुत्ने बेलामा कपालको ख्याल गर्नुपर्छ । यदि राती सुत्ने बेलामा कपालको ख्याल गरिएन भने टुक्रिने रुखो हुने झर्ने जस्ता स’मस्याहरु आउने गर्छन् ।राती सुत्दा सुत्ने पो’जिसन फरक फरक हुने भएकाले कपाल पनि एउटै पो’जिसनमा रहदैन् ।
त्यसकारण कपाल लट्टा पर्ने, झर्ने जस्ता स’मस्याहरु ब’ढेर जान्छ । त्यसैले कपालमा हुने क्ष’तिबाट ब’च्नको लागि दिन भरि जस्तै रात भर पनि कपालको स्याहार गर्न जरुरी रहेको छ ।कति पय मान्छेहरु राती कपाल बाधेर सुत्दा झ’र्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ ।कसैले यसको वि’परत भन्ने गर्छन् । जसले गर्दा मानिसहरुमा कपाल बाँधेर सुत्ने वा छो’डेर सुत्ने भन्नेम दु’विधा हुन्छ । रातको सयमयम कपाल खोलेर हैन् कपाल बाँ’धेर सुत्न ठिक हुन्छ । किनकी कपाल खोलेर सु’त्दा कमजोर हुने र झ’र्ने भएकाले बाँ’धेर सुत्दा नै राम्रो हुन्छ ।यसबाट कपाल झ’र्ने स’मस्या कम हुन्छ ।
यस्तो छ कपाल बाँ’धेर सुत्नुको फाइदा— :रुखोपन ह’टेर जाने : राती सुत्न प्रयोग गरिएको तकियाले कपालमा प्रयोग गरिएको तेल सो’च्ने भएकाले कपाल रुखो हुने गर्छ । जुन समस्याबाट बच्नको लागि कपाल खोलेर सुत्नुभन्दा बाँ’धेर सुत्नु राम्रो हुन्छ ।कपाल सिल्की हुन्छ : कतिपयलाई सिल्की कपाल मन पर्छ । यदि त्यसो हो भने बेलुका सुत्ने बेलामा कपालमा हे’यर माक्स लगाएर सा’वर क्या’म्प लगाएर सुत्नुवपर्छ । बिहान उठेर मा’इल्ड श्या’म्पूले कपाल धुएमा कपाललाई सि’ल्की र सा’इनिङ ब’नाउन सकिन्छ ।
कपाल टु’क्रने ड’र हुँदैन : राती सुत्ने बेलामा कपाल बा’धेर सु’त्नाले टु’क्रने, ड’र हुँदैन् । सुतीको त’कीयाको प्रयोग गरेर सु’त्नाले कपाल सु’ख्खा हुन्छ । यसबाट ब’च्नको लागि तकियाको खोल सि’ल्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। कपाल स्वस्थ हुन्छ : कपाललाई स्वस्थ राख्नको लागि भि’जेको कपाल बा’ध्न हुँदैन् । कपाललाई सु’काएर हल्का किसिमलो बा’ध्नुपर्छ । यसो गर्दा कपाल टु’क्रने ८० प्रतिशत कम गर्छ। कपालमा क’र्ल बस्छ : यदि तपाई आफ्नो कपाललाई क’र्ली बनाउन चाहनुहुन्छ भने कपाललाई जु’रो बनाएर सुत्नुपर्छ । बिहान उठ्दा कपाल क’र्ली हुन्छ।
कपाल बा’ध्ने तरीका : सिधा कपाल भएको व्यक्तिले हल्का चु’ल्ठो बनाएर सुत्नुपर्छ जसले गर्दा कपाल ल’ट्टा पर्दैन्। लामो कपाल भएको व्यक्तिले जु’रो बनाउनु पर्छ । तर जु’रो बनाउँदा कपाल धेरै त’न्काउनु हुँदैन् । कपाल घुम्रेको व्यक्तिले कपाललाई पछाडी जु’रो बनाएर सुत्नु पर्छ । जसले सु’त्न कुनै समस्या गर्दैन् । र बिहान उ’ठ्दा कपालको आकार ठीक अवस्थामा रहन्छ।